विचित्र संसार Archives - Current Nepal News
दुनियाँकै महंगो स्याण्डिल, मूल्य २ अर्ब रुपैयाँ
एजेन्सी। महिलाले लगाउने स्याण्डिलको फरक फरक मूल्य र डिजाइनमा पाइन्छ । तर दुनियाँको सबैभन्दा महंगो स्याण्डिलको मूल्य थाहा पाउनुभयो भने तपाइँले जिब्रो टोक्नुहुनेछ। एकजोर स्याण्डिलको मूल्य हजार, लाख, करोड रुपैयाँमा नभई अर्ब रुपैयाँ पर्दछ।हो युएइको दुबई सहरमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ पर्ने दुनियाकै महंगो स्याण्डिल बनेको छ। यो स्याण्डिलको मूल्य १ करोड ७० लाख डलर छ। बहुमूल्य हिरा र सक्कली सुनबाट बनेको यो एकजोर स्याण्डिल बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। यतिधेरै महंगो भएपछि यो चिज बनाउन पनि कम्ता [विस्तृतमा...]
रजश्वलाको रगतले बनाइएको सुन्दर पेन्टिङ !
एजेन्सी। पेन्टिङ बनाउने कलाकारहरुले असंख्य पेन्टिङ बनाउलान् तर दुनियाँलाई नै अचम्म पार्ने खालका पेन्टिङ भने विशेष हुन्छन्। एउटा यस्तो पेन्टिङ हो यो। जसका बारेमा थाहा पाउँदा जोकोही पनि अचम्ममा पर्दछ। वास्तवमा यो कुनै चानचुने पेन्टिङ होइन। एकजना महिलाले रजश्वलाका क्रममा निस्किएको आफ्नै रगतबाट तयार गरेको पेन्टिङ हो। आफ्ना रगतबाट उनले यस्तो तस्वीर तयार गरिन् कि त्यसले सबैलाई तीनछक बनाउँदछ। रोमानियाकी यी महिला पेशाले पेन्टर नै हुन्। उनको नाम टिमी पाली हो। उनले रजश्वलाको रगतबाट एक [विस्तृतमा...]
यी राजा जसको ६० वटी श्रीमती छन्
एजेन्सी । एउटा पुरुषले एकभन्दा बढी श्रीमतीलाई मिलाएर राख्न सक्ला कि नाई ? तर यो दुनियाँमा एकजना यस्ता मानिस छन् जसले एकदुई जना होइन पूरै ६० जना पत्नीलाई मिलाएर राखेका छन्। आधुनिक युगमा समेत ६० वटी पत्नीका जोई हुनु कुनै चानचुने कुरा होइन । हुनत यी व्यक्ति पनि चानचुने कहाँ हुन् र ? उनी परे कोन्याक आदिवासी समुदायका राजा । उनको नाम अंग नगोवांग हो। उनको राज्यमा कूल ७५ वटा गाउँ छन्। भारत र म्यान्मारको बीचमा पर्ने आदिवासी क्षेत्र यिनको राज्य हो। गाउँको आधा हिस्सा भारतमा र आधा हिस्सा म्यान्मारमा [विस्तृतमा...]
यस्तो ठाउँ जहाँ लोग्नेको जुत्ताको पानी खुवाइन्छ पत्नीलाई
एजेन्सी। २१ औँ शताब्दिको युगमा महिलाहरु पुरुषसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका छन्। पुरुषले गर्ने काम गर्न महिलाहरु सक्षम छन्। तर भारतमा एउटा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ महिलाहरु नरकको जीवन भोग्न बाध्य छन् । अनि महिलाहरु केवल पुरुषको उपयोगिताको साधन बनिरहेका छन्। भारतको राजस्थानस्थित भिलवाँडा गाउँमा महिलाहरुलाई उनीहरुका लोग्नेको जुत्ताको पानी खुवाइन्छ ।गाउँमा रहेको बंक्याराणी माता मन्दिरमा महिलालाई आफ्नो लोग्नेको जुत्तामा पानी भरेर पिलाउने प्रथा रहेको छ। यसो गर्नाले शौभाग्य [विस्तृतमा...]
महिलालार्इ यौनसम्पर्कको कस्तो शैली मन पर्छ ?
एजेन्सी। मानिसका रुची फरक फरक हुन्छ। त्यसैले पनि कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ रु कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ रु अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ रु भन्ने विषयमा सोधिएको थियो । उक्त अनलाइन सर्भेक्षणले केही रोचक नतिजा दिएको छ । झण्डै चार लाख मानिसले भाग लिएको उक्त सर्भेक्षणमा ६२ प्रतिशत महिलाहरुले [विस्तृतमा...]
कोलम्बियामा गधा सुन्दरी प्रतियोगिता
एजेन्सी। सुन्दरी प्रतियोगिता विभिन्न खाले हुन्छ। ल्याटिन अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा गधा सुन्दरी प्रतियोगिता भएको छ। अमासिजोस नामक गधाले यस पटकको सुन्दरी प्रतियोगिता जितेको छ। १४ वर्षदेखि त्यहाँको मोनिक्विरा सहरमा हुँदै आएको उक्त वार्षिक गधा महोत्सव अन्तर्गत आयोजित गधा सुन्दरी प्रतियोगितामा स्थानीय महिलाको मौलिक परिहनमा सजिएको उक्त गधाले उपाधि जितेको छ। आर्काबुको सहरका अल्भारो लोपेजले पालेको उक्त गधाको जिउमा कलात्मक कपडाका साथै लामा लामा रौँ, भुत्ले आखिभौँले धेरैको ध्यान [विस्तृतमा...]
नांगिएर साइकलमा सरर
एजेन्सी। विश्वभर जुन ९ मा साइकल सुरक्षाका विषयमा जनचेतना जगाउने उद्धेश्यले वल्र्ड नेकेड बाइक राइड डे मनाइयो। यो पटकको १५ औँ निर्वस्त्र साइकल दौड दिवसमा विश्वका विभिन्न सहरहरुमा हजारौँ साइकलप्रेमीहरु निर्वस्त्र भएर साइकल दौडाए ।बेलायतको लण्डनका विभिन्न ठाउँमा सयौँ साइकलयात्रीहरु निर्वस्त्र साइकल यात्रामा निस्किए। वृद्धवृद्धा देखि तरुनी तन्नेरीहरु सबै निर्वस्त्र भएर साइकल यात्रामा अघि बढिरहेका थिए। कतिपयले साइकलयात्रीले भोग्नुपर्ने जोखिम र सुरक्षाका विषयमा जनचेतनामूलक [विस्तृतमा...]
प्रकृतिले कब्जा गरेको अनौठो गाउँ
एजेन्सी। चीनको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको झेजियांग प्रान्तस्थित शेंगशान टापु। यस टापुमा एउटा गाउँ छ। जसको नाम हुटोवान हो। यस गाउँको दृश्य कुनै हलिउड फिल्मको भुताहा गाउँको दृश्य भन्दा कम छैन। हरियो गाउँ तथा लहराहरुले गाउँका सबै भवनहरुमा कब्जा जमाएको छ। यस गाउँका सबै घरहरु हरिया छन्, कुनै खण्डहरमा वर्षौँपछि रुखविरुवा पलाएको जस्तो। समाचार एजेन्सी एएफपीका एकजना फोटो पत्रकारले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी त्यहाँका आकर्षक तस्वीरहरु क्यामरामा कैद गरे। कुनै समय ५ सय घर रहेको र थुप्रै जनसंख्या [विस्तृतमा...]
यौनहिंसाबाट जोगाउन किशोरीहरुको वक्षस्थल तातो ढुंगाले डामिन्छ
एजेन्सी। संसारमा विभिन्न खाले अनौठा प्रथाहरु छन्। कतिपय प्रथाहरु निकै अन्धविश्वासी तथा दर्दनाक पनि रहेका छन्। तर सदियौँदेखि यस्ता दर्दनाक प्रथाको पालना अहिले सम्म पनि हुने गरेको छ भन्ने झनै दुःख लाग्छ। एउटा यस्तै प्रथा अफ्रिकामा रहेको छ, जसको बारेमा सुन्दैमा जिउ काँप्छ। दक्षिण अफ्रिका, क्यामरुन र नाइजेरियामा यो प्रथा रहेको छ। साथै बेलायतमा बस्ने अफ्रिकी समुदायका कतिपय किशोरी तथा युवतीहरुलाई पनि यो प्रथामा बाध्य गराइने गरिएको बताइन्छ। यो अनौठो तथा दर्दनाक प्रथाको नाम ब्रेस्ट [विस्तृतमा...]